Izifundo ze-Causation mayelana Neziphuzo Zobulili Ezingcolile - I-Foundation Foundation
Ikhaya Ibhulogi yezindaba Izifundo ze-Causation mayelana Neziphuzo Zobulili Ezingcolile
Izifundo ze-Causation mayelana Neziphuzo Zobulili Ezingcolile
i-adminacount888 I-15th Ngo-Ephreli 2019 Izindaba zakamuva
Ukushicilelwa kwencazelo ye-Compulsive Sexual Behavior Disorder ngoJuni 2018 yi-WHO kwakususelwa ebufakazini obunamandla. Kodwa-ke, abanye abantu basaphika ukuthi ukusetshenziswa kwezithombe zocansi kungadala ukulimala kwengqondo noma komzimba. Kule bhulogi sibheka izifundo eziyisithupha ze-causation ezishicilelwe kuze kube manje ezibonisa ukubanga njengoba abahlanganyeli beqedile ukusetshenziswa kocansi futhi belapha ukungasebenzi kobulili okungapheli. Bonke baxhumanisa ukusetshenziswa kocansi noma umlutha wezocansi ezenzakalweni zocansi nokuvuka okuncane.
1) Ingabe Izithombe Zobulili Ezingcolile Zase-Internet Zibangela Ukuhlukunyezwa Ngokocansi? Ukubukezwa Ngemibiko Yomtholampilo (2016)
Ukubuyekezwa okubanzi kwezincwadi ezihlobene nezinkinga zocansi ezibangelwa ucansi. Ukubandakanya odokotela be-NNC be-7 base-US, ukubuyekezwa kunikeza imininingwane yakamuva eveza ukwanda okukhulu kwezinkinga zobulili ezisencane. Iphinde ibuyekeze izifundo zezinzwa ezihlobene nokulutha kwezilonda kanye nesimo socansi nge-inthanethi ye-inthanethi. Odokotela banikeza imibiko ye-3 emitholampilo yamadoda athuthukise ukuhlukunyezwa ngokocansi okubangelwa ucansi. Amadoda amabili kulawo madoda amathathu aphulukisa izidakamizwa zabo ngokocansi ngokuqeda ukusetshenziswa kocansi. Indoda yesithathu yabhekana nokuthuthukiswa okuncane njengoba engakwazi ukuyeka ukusetshenziswa kocansi. Umbhalo:
Izici zendabuko eziye zachaza ubunzima bobulili besilisa zibonakala zinganele ukwenza i-akhawunti ngokunyuka okukhulu ekusebenziseni kwe-erectile, ukubambezeleka kwe-ejaculation, ukunciphisa ukwaneliseka ngokobulili, nokunciphisa i-libido ngesikhathi sokulala ngobulili kumadoda ngaphansi kwe-40. Lokhu kubuyekezwa (i-1) kubheka idatha kusuka ezizindeni eziningi, isibonelo, imitholampilo, izidakamizwa (izidakamizwa / urology), kwengqondo (isimo sengqondo socansi), inhlalo yomphakathi; futhi (i-2) inikeza uchungechunge lwemibiko yemitholampilo, konke ngenhloso yokuphakamisa isiqondiso esingahle sokucwaninga esikhathini esizayo salesi simo. Ukuguqulwa kwesistimu yokugqugquzela ebuchosheni kuhlolisiswa njengendlela etiology ebonakalayo ebangela ukuhlukunyezwa ngokocansi okuhlobene nocansi.
Lokhu kubuyekezwa kuphinde kubone ubufakazi bokuthi izakhiwo eziyingqayizivele ze-pornography e-Inthanethi (intsha engenamkhawulo, okusemandleni okukhula okulula kuya kwezinto ezimbi kakhulu, ifomethi yevidiyo, njll.) Ingase ibe namandla ngokwanele ukuvusa ukuhlukunyezwa ngokocansi ezintweni zezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi ezisebenzisana nezinguquko kalula -abalingani bokuphila, njengokuthi ubulili nabalingani abafisa ngeke babhalise njengemigomo yokulindela kanye nokwehla kokuvusa. Imibiko yemitholampilo iphakamisa ukuthi ukuqeda ukusetshenziswa kwezithombe zobulili ezingcolile kuyi-Internet ngezinye izikhathi kuyanele ukuguqula imiphumela emibi, kugcizelela isidingo sokuphenyisisa olunzulu ngokusebenzisa izindlela ezinezihloko ezisusa ukuhlukahluka kokusetshenziswa kocansi kwe-Internet.
I-Foundation Foundation wabhala indaba mayelana nalolu cwaningo lapho liphuma kuqala.
2) Imikhuba yokushaya indlwabu kanye nokuhlukunyezwa ngokocansi (2016)
Lolu cwaningo luyi-psychiatrist yesiFulentshi engumongameli wamanje we- I-European Federation yezocansi. Ngesikhathi i-abstract ehamba phambili phakathi kwezithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi nokusebenzisa indlwabu, kuyacaca ukuthi ikakhulukazi ibhekisela i-porn-induced ukuhlukunyezwa ngokocansi (ukungasebenzi kwe-erectile ne-anorgasmia). Leli phepha libheke ngokuhlangenwe nakho kwakhe okuhlangenwe nakho komzimba nabesilisa be-35 abaye bahlakulela ukungasebenzi kahle kwe-erectile kanye / noma i-anorgasmia, nezindlela zakhe zokwelapha zokuzisiza. Umbhali uthi iziguli zakhe eziningi zasebenzisa i-porno, kanti eziningana ziyizidakamizwa ezingcolile zobulili ezingcolile. Amaphuzu abonakala ku-intanethi njengesizathu esiyinhloko sezinkinga (khumbula ukuthi ukushaya indlwabu akubangeli i-ED engapheli, futhi akukaze kunikezwe njengesisusa se-ED). U-19 wamadoda we-35 wabona ukuthuthukiswa okuphawulekayo ekusebenzeni ngokocansi. Amanye amadoda aye aphuma ekwelashweni noma asazama ukuphola. Okucaphuno:
Intro: Akunabungozi futhi kuyasiza ngendlela yakhe ejwayelekile eyenziwa kabanzi, mukuphazamiseka ngesimo sayo eseqisayo nesivelele, esivame ukuhlotshaniswa nanamuhla nokulutha kwezithombe zocansi, kuvame ukunganakwa ekuhlolweni komtholampilo kokungasebenzi kahle ngokocansi okungadala.
Ezenye: Imiphumela yokuqala yalezi ziguli, ngemuva kokwelashwa "ukungafundi" imikhuba yabo yokushaya indlwabu kanye nokulutha kwabo okuvame ukuhlotshaniswa nezithombe zocansi, kuyakhuthaza futhi kuyathembisa. Ukwehliswa kwezimpawu kutholakale ezigulini eziyi-19 kwezingu-35. Ukungasebenzi kuhlehlisiwe futhi lezi ziguli zikwazile ukujabulela ukwenza ucansi olwanelisayo.
Isiphetho: Ukushaya indlwabu okuluthayo, okuvame ukuhambisana nokuncika kwi-cyber-pornography, kubonakale kudlala indima kwi-etiology yezinhlobo ezithile zokungasebenzi kahle kwe-erectile noma i-coital anjaculation. Kubalulekile ukukhomba ngokuhlelekile ukuba khona kwale mikhuba kunokwenza ukuxilongwa ngokuqedwa, ukuze kufakwe izindlela zokweqa umkhuba ekuphatheni lezi zinkinga.
3) Umkhuba ongavamile we-masturbatory njengento etiological ekuxilongweni kanye nokwelashwa kokuhlukunyezwa ngokocansi kumadoda amasha (2014)
Esinye sezifundo ze-4 kuleli phepha libika ngendoda enezinkinga zocansi ezibangelwa izithombe zocansi (i-libido ephansi, izitho, i-anorgasmia). Ukungenelela ngokocansi kudinga ukuyeka ukuziqhenya kwe-6 kwi-porn nokushaya indlwabu. Ngemuva kwezinyanga ze-8 le ndoda yabika isifiso sobulili esiphuthumayo, ubulili obuphumelelayo kanye ne-orgasm, nokujabulela "imikhuba emihle yobulili. Lokhu kungukuqala kokubuyekezwa kontanga kokuthola kabusha okuvela ekucansheni kocansi okubangelwa ucansi. Okucaphuno okuvela ephepheni:
“Ngesikhathi ebuzwa ngemikhuba yokushaya indlwabu, ubike ukuthi phambilini ubeshaya indlwabu ngamandla nangejubane ngenkathi ebuka izithombe zocansi kusukela ebusheni. Izithombe zobulili ezingcolile ekuqaleni zazine-zoophilia, nobugqila, ukubusa, usizi, kanye ne-masochism, kepha ekugcineni wajwayela lezi zinto futhi wadinga izigcawu ezingcolile zobulili ezingcolile, kufaka phakathi ubulili be-transgender, imibuthano yezocansi kanye nobulili obunobudlova. Wayejwayele ukuthenga ama-movie ezithombe zocansi ezingekho emthethweni ngezenzo zocansi ezinodlame nokudlwengula futhi abone ngeso lengqondo lezo zigcawu emcabangweni wakhe wokuziphatha ngocansi nabesifazane. Kancane kancane waphelelwa isifiso namandla okucabanga futhi wehlisa imvamisa yokushaya indlwabu. ”
Ngokubambisana nezikhathi zamasonto onke nomelaphi wezocansi, isiguli sayalwa ukuthi sigweme noma yikuphi ukuvezwa kwezinto eziveza ezocansi, kufaka phakathi amavidiyo, amaphephandaba, izincwadi kanye nezithombe zocansi ze-intanethi.
Ngemuva kwezinyanga eziyi-8, isiguli sabika ukuthi sathola i-orgasm ephumelelayo nokujula. Wavuselela ubuhlobo bakhe nalowo wesifazane, futhi kancane kancane baphumelela ekujabuleleni imikhuba emihle yezocansi.
4) Kunzima kangakanani ukuphatha ukujula okwephuzile ngaphakathi komodeli wesikhashana ongokwengqondo? Ukuqhathaniswa kwesifundo (2017)
Umbiko wezimbili "amacala ahlanganisiwe" okubonisa izimbangela kanye nokwelashwa kokuphuza ukujula (i-anorgasmia). "Isiguli B" sabeka amantombazane amaningana aphathwe yi-therapist. Ngokuthakazelisayo, leli phephandaba lithi "ukusetshenziswa kocansi lwe-Patient B" bekuye kwaba yizinto ezikhudlwana "," njengoba kunjalo njalo ". Leli phephandaba lithi ukuhlotshaniswa kocansi okubambezelekile ukulibazisa akuyona into engavamile, futhi kuphakama. Umbhali ubiza ucwaningo oluthe xaxa emiphumeleni ye-porn yokusebenza ngokocansi. Ukuphulukiswa kwe-Patient B yokulibaziseka kwe-Patient B kwaphulukiswa ngemva kwamaviki angu-10 angenayo i-porn. Okucaphuno:
Amacala amacala ahlanganisiwe athathwa emsebenzini wami ngaphakathi kweNational Health Service eCroydon University Hospital, eLondon. Ngenkathi yokugcina (isiguli B), kubalulekile ukuphawula ukuthi isethulo sibonisa inamba yamadoda abesilisa abathunyelwe amaGP abo ngokuhlonza okufanayo. Isiguli B uneminyaka engu-19 oneminyaka engu-17 ubudala owethule ngoba wayengakwazi ukufaka nge-ejaculate ngokungena. Ngesikhathi eyi-13, wayehlala efinyelela kumasayithi e-pornography ngedwa ngokwayo ngokuseshwa kwe-intanethi noma ngezixhumanisi abangane bakhe abamthumelele kuzo. Waqala ukushaya indlwabu ubusuku bonke ngesikhathi ecwaninga ifoni yakhe ngesithombe ... Uma engazange aphule indlala engakwazi ukulala. Izithombe zobulili ezingcolile ayezisebenzisayo zaye zanda, njengoba kunjalo njalo (bheka i-Hudson-Allez, i-2010), zibe izinto eziqinile (akukho okungekho emthethweni) ...
Isineke B sachayeka ezithombeni zocansi ngezithombe zobulili ezingcolile kusukela eminyakeni eyi-12 futhi izithombe zobulili ezingcolile ayezisebenzisa zase zikhuphukele ebugqilini nasekubuseni ngeminyaka engu-15.
Sivumelene ngokuthi ngeke esasebenzisa izithombe zobulili ezingcolile ukushaya indlwabu. Lokhu kusho ukushiya ifoni yakhe egumbini elihlukile ebusuku. Sivumelene ngokuthi uzoshaya indlwabu ngenye indlela….
Isiguli B ukwazile ukufeza i-orgasm ngokungena ngeseshini yesihlanu; amaseshini anikezwa njalo ngemuva kwamasonto amabili eCroydon University Hospital ngakho-ke iseshini yesihlanu silingana cishe namaviki ayishumi kusukela kuboniswane. Wayejabule futhi ekhululekile kakhulu. Ekulandeleni izinyanga ezintathu nesiguli B, izinto bezisahamba kahle.
Isiguli B akuyona icala elizimele ngaphakathi kweNational Health Service (NHS) futhi empeleni izinsizwa ngokujwayelekile ezithola ukwelashwa ngokobulili obufanayo, ngaphandle kwabalingani bazo, zikhuluma ngokwazo ekugqugquzelweni koshintsho.
Ngakho-ke le ndatshana isekela ucwaningo lwangaphambilini oluxhumanise isitayela sokushaya indlwabu nokungasebenzi kahle kwezocansi nezithombe zobulili ezingcolile nesitayela sokushaya indlwabu. Lo mbhalo uphetha ngokusikisela ukuthi impumelelo yabelaphi abasebenza ngokobulili ekusebenzeni ne-DE akuvamile ukurekhodwa ezincwadini zemfundo, okuvumele umbono we-DE njengesifo esinzima ukuselapha uhlala uphikisana kakhulu. Lo mbhalo udinga ucwaningo ngokusetshenziswa kwezithombe zocansi kanye nomphumela walo ekushaya indlwabu kanye nokukhulelwa kwezitho zangasese.
5) Isimo se-Psychogenic Anejaculation: Isifundo Sezifundo (2014)
Imininingwane idalula icala lokwehliswa kwezithombe zocansi. Okuhlangenwe nakho kobulili kuphela komyeni ngaphambi komshado kwakunjalo ukushaya indlwabu ezithombeni zobulili ezingcolile - lapho akwazi khona ukuhlaziya. Uphinde wabika ukuthi ukulala ngokobulili kungukuvuthwa okuncane kunendlela yokushaya indlwabu. Ucezu oluyinhloko wolwazi ukuthi "ukuqeqeshwa kabusha" kanye nokwelashwa kwengqondo kwehlulekile ukuphulukisa ukukhunjulwa kwakhe. Lapho lezo zingenelelo zingaphumeleli, abahlengikazi basikisela ukuvinjelwa okuphelele ngokushaya indlwabu ku-pornography. Ekugcineni lokhu kuvinjelwa kuholele ekusebenzelaneni ngokocansi okuphumelelayo nokukhipha umklamo nomlingani okokuqala empilweni yakhe. Izingcaphuno ezimbalwa:
U-33 ngumuntu wesilisa oshadile oneminyaka engama-XNUMX onobulili obuhlukile, uchwepheshe ovela emkhakheni wezenhlalo nezomnotho ophakathi nendawo. Akanabo oxhumana nabo ngokocansi ngaphambi komshado. Wayebuka izithombe zobulili ezingcolile futhi eshaya indlwabu njalo. Ulwazi lwakhe ngezocansi nangokobulili lwalwanele. Ukulandela umshado wakhe, uMnu.A uchaze i-libido yakhe njengokujwayelekile ekuqaleni, kepha ngokuhamba kwesikhathi wehlisela eceleni ubunzima bakhe bokukhishwa. Ngaphandle kokunyakaza okuxakile kwemizuzu engama-30-45, wayengakaze akwazi ukukhipha noma ukufeza i-orgasm ngesikhathi socansi lokungena nonkosikazi wakhe.
Imithi kaMnu. A yalinganiswa; I-clomipramine ne-bupropion ziyekisiwe, futhi i-sertraline yagcinwa ngomthamo we-150 mg ngosuku. Izikhathi zokwelashwa nalezi zithandani zazibanjwa masonto onke ezinyangeni ezimbalwa zokuqala, ngemuva kwalokho zabekwa phakathi kwamasonto amabili nangemva kwenyanga. Iziphakamiso ezithile ezibandakanya ukugxila emizweni yezocansi nokugxila ekuhlangenwe nakho kocansi kunokujula zisetshenzisiwe ukusiza ukunciphisa ukukhathazeka kokusebenza nokubukelwa. Njengoba izinkinga zaqhubeka naphezu kwalokhu kungenelela, kwakucatshangelwa ukwelashwa okujulile kwezocansi.
Ekugcineni baqala ukuvimbela ngokuphelele ukushaya indlwabu (okusho ukuthi uqhubeke nokushaya indlwabu ocansini ngesikhathi sokungenelela okuhlulekile ngenhla):
Kwaphakanyiswa ukuvinjelwa kwanoma yiluphi uhlobo lwezenzo zocansi. Ukuzivocavoca okuqhubekayo kokugxila kwezinzwa (okokuqala okungezona okobulili kanye nobulili bangaphambilini) kwaqalwa. UMnu. A uchaze ukungakwazi ukuhlangabezana nezinga elifanayo lokukhuthazeka ngesikhathi socansi lokungena ngokuqhathaniswa nalokho abhekana nakho ngesikhathi sokushaya indlwabu. Lapho ukuvinjelwa kokushaya indlwabu sekuphoqelelwe, wabika isifiso esikhulayo sokwenza ucansi nomlingani wakhe.
Ngemuva kwesikhathi esichaziwe, ukuvinjelwa kokushaya indlwabu ezithombeni ezingcolile kuholela empumelelweni:
Khonamanjalo, uMnu A nomkakhe banqume ukuqhubeka namasu okusiza ukuzala (i-ART) futhi bathola imijikelezo emibili yokufakwa kwesisu ngaphakathi. Ngesikhathi sokuzijwayeza, uMnu A ukhishwe umjovo okokuqala ngqa, ngemuva kwalokho ukwazile ukukhipha umuthi ngokwanelisayo ngesikhathi iningi lezithandani zihlanganyela ocansini.
6) Izithombe Zobulili Ezingcolile Zenza Ukungasebenzi Kwe-Erectile Phakathi Kwabesilisa Abasha (2019)
Abstract: Leli phepha lihlola lo mkhuba izithombe zobulili ezingcolile zenza ukukhubazeka kwe-erectile (I-PIED), okusho ukuthi izinkinga zesifo socansi emadodeni ngenxa yokusebenzisa izithombe zobulili ezingcolile ze-intanethi. Idatha yempi evela kubantu abahluphekile kule nkinga iqoqwe. Inhlanganisela yomlando wokuphila komlando wokuphila (ngezingxoxo ezilandelanayo ezilandelanayo ezinemininingwane e-intanethi) kanye nezinkampani zangasese eziku-intanethi zisetshenzisiwe. Idatha iye yahlaziywa ngokusebenzisa ukuhlaziywa kwemibhalo yokuhumusha (ngokusho komqondo wezindaba kaMcLuhan), ngokusekelwe ekufakweni kwe-analytic. Uphenyo lobuciko lubonisa ukuthi kukhona ukuhlangana phakathi kokusebenzisa izithombe zobulili ezingcolile kanye nokusebenza okungasebenzi kwe-erectile okubonisa ukuthi i-causation.
Okutholakele kusekelwe kwizingxoxo ze-11 kanye nama-diaries amabili wevidiyo nama-diaries ematheksthi amathathu. La madoda aphakathi kweminyaka engu-16 ne-52; Bika ukuthi isingeniso sokuqala kwezithombe zobulili ezingcolile (ngokuvamile ngesikhathi sokukhula) kulandelwa ukusetshenziswa kwansuku zonke kuze kufinyelelwe iphuzu lapho okuqukethwe okwedlulele (okubandakanya, isibonelo, izakhi zobudlova) kuyadingeka ukuze kugcinwe ukuvusa. Isigaba esibucayi sifinyelelwa lapho ukuvuswa kocansi kuhlotshaniswa kuphela nezithombe ezingcolile zobulili ezingcolile, okwenza ubuhlobo bobulili bland futhi abujabulise. Lokhu kubangela ukungakwazi ukugcina ukulungiswa nomlingani wangempela, lapho abantu beqala khona inqubo "yokuvuselela", beyeka izithombe zobulili ezingcolile. Lokhu kuye kwasiza amanye amadoda ukuba athole amandla abo okufeza futhi agcine ukulungiswa.
Isingeniso esigabeni somphumela
Ngemva kokucubungula idatha, ngiqaphele amaphethini athile nama-themes aphindaphindiwe, elandela ukulandelana kwenkathi kuzo zonke izingxoxo. Lezi izi: Isingeniso. Esinye sitholwa ezithombeni ezingcolile, ngokuvamile ngaphambi kokukhulelwa. Ukwakha umkhuba. Omunye uqala ukuqeda izithombe zobulili ezingcolile njalo. Ukubanjwa. Omunye uphendukela emaqenjini amaningi "okudlulele" wezithombe zobulili ezingcolile, okuhlakaniphile okucuketfwe, ukuze afinyelele imiphumela efanayo eyafinyelelwa ngaphambilini ngokusebenzisa izinhlobo ezincane ezingcolile zobulili ezingcolile. Ukuqaphela. Omunye uqaphela izinkinga zobulili ezithintekayo ezikholelwa ukuthi zibangelwa ukusetshenziswa kocansi. Inqubo ye "Re-boot". Omunye uzama ukulawula ukusetshenziswa kwezithombe zobulili ezingcolile noma ukuwuqeda ngokuphelele ukuze aphinde avuselele ubulili bakhe. Idatha evela ezixoxweni ihanjiswa ngokusekelwe enhlakeni engenhla.
Ngaphandle kwezifundo ze-causation ezibalwe ngenhla, Leli khasi liqukethe ama-athikili namavidiyo ngama-130 ochwepheshe (urology professors, urologists, psychiatrists, psychologists, sexologists, MDs) abavuma futhi baphumelela ngokuphatha i-porn-kuhoxiswa ED kanye nokulahlekelwa izithombe ezingcolile zobulili.
Yabelana ngalesi sihloko